20 Jan နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ ခြဲလျဆီးသတငျးမြားစုစညျးမှု – Sports A2Z
20 Jan နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ ခြဲလျဆီးသတငျးမြားစုစညျးမှု
-ခြဲလျဆီးအသငျးဟာ အင်ျဂါနညေ့က လကျစတာစီတီးအသငျးကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ရလဒျဆိုးတှေ ဆကျလကျရငျဆိုငျခဲ့ရပွီးနောကျ နညျးပွလမျးပတျရဲ့ နရောမှာ အစားထိုးဖို့အတှကျ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့နညျးပွကို ရှာဖှနေပွေီလို့ The Athletic က ဖျောပွခဲ့ပွီး ယခုအပတျ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကစားရမယျ့ လူတနျတောငျးနဲ့ အကျဖျအဖေလားပှဲစဉျမှာ နောကျတဆငျ့ တကျရောကျနိုငျမလားဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့ဖို့သာ ကနျြတော့တယျလို့ သိရ။
-ခြဲလျဆီးအသငျးနညျးပွ ဖရနျ့လမျးပတျဟာ လကျစတာစီးတီးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲစဉျဟာ ရှုံးပှဲတဈခုသာ ဖွဈတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ ခြဲလျဆီးအသငျးရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့စှမျးဆောငျရညျနဲ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျပူပငျနတေယျလို့ ဝနျခံခဲ့ပွီး အဲဒါကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျဖို့အတှကျ အသငျးရဲ့ စရိုကျလက်ခဏာ ပွသဖို့ လိုအပျတယျလို့ ပွောကွားခဲ့။
-ဂမြေီ ရကျကျနကျဟာ လကျစတာစီးတီးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲစဉျအတှကျ ခြဲလျဆီးအသငျးကစားသမားတှကေို ဝဖေနျပွဈတငျခဲ့ပွီး ဟတျဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးဟာ အခှငျ့အရေးရတဲ့အခြိနျမှာ မြားမြားစားစား ဘာမှ မလုပျနိုငျခဲ့ဘူးလို့ ဝဖေနျခဲ့သလို ကှငျးလယျမှာလညျး ဟနျခကျြဆိုးဆိုးရှားရှား ပကျြနတောနဲ့ပတျသကျပွီး နညျးပွလမျးပတျကို ပွဈတငျခဲ့။
-ခြဲလျဆီးအသငျးနညျးပွ လမျးပတျက လကျစတာစီးတီးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲစဉျအပွီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဆုဖလားကို စိနျချေါနိုငျဖို့အတှကျ ၎င်းငျးရဲ့အသငျးဟာ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူးလို့ ပွောကွားခဲ့ပွီး နောကျဆုံးအဝေးကှငျး ၅ ပှဲမှာ ၄ ပှဲအထိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး နညျးပွရာထူးအတှကျ ဖိအားတှတေိုးလာခဲ့တဲ့ လမျးပတျက ၎င်းငျးဟာ ဖိအားတှကေို ကိုငျတှယျရာမှာ တျောတယျလို့ ပွောကွားခဲ့။
-ခြဲလျဆီးနောကျခံကစားသမား ရီးဈ ဂြိမျးဈဟာ အင်ျဂါနညေ့မှာ လကျစတာစီးတီးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲစဉျက ဒုတိယဂိုးကိုး ဆိုးရှားစှာ ခံစဈခဉျြးကပျခဲ့တဲ့အတှကျ ဂမြေီ ရကျကျနကျရဲ့ ဝဖေနျမှုကို ခံခဲ့ရပွီး ညာနောကျခံကစားသမားဖွဈလာဖို့အတှကျ အခွခေံလလေ့ာသငျယူမှုက အရေးကွီးတယျလို့ ရကျကျနကျက ပွောကွားခဲ့။
-လကျစတာစီးတီးအသငျးနညျးပွ ဘရနျဒနျရျောဂြာက ခြဲလျဆီးအသငျးကို အနိုငျရရှိခဲ့ပွီးနောကျ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးနရောကို တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ယခုရာသီ လကျစတာစီးတီးအသငျးရဲ့ ဆုဖလားစိနျချေါနိုငျခွနေဲ့ပတျသကျပွီး ဆကျလကျ ငွငျးဆိုသှားခဲ့ပွီး မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျတို့ရဲ့ အရညျအသှေးက ခနျြပီယံတှဖွေဈပွီး မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကတော့ အလှနျကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောကွားခဲ့။
-လကျစတာစီးတီးကှငျးလယျကွယျပှငျ့ ဂြိမျးဈ မကျဒီဆငျက ခြဲလျဆီးအသငျးကို အနိုငျယူပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ၁ နရောကို တကျလှမျးနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ ခြဲလျဆီးရဲ့အားနညျးခကျြဖွဈတဲ့ ပွနျတညျဘောတှကေနေ ထိုးဖောကျနိုငျမယျလို့ လကျစတာစီးတီးက ယုံကွညျခကျြရှိခဲ့ကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပွီး ခြဲလျဆီးအသငျးဟာ ပွနျတညျဘောတှမှော တခါတရံ သိပျအာရုံမစိုကျထားတာကို တှခေဲ့တဲ့အတှကျ အဲဒီကနေ အခှငျ့အရေးရနိုငျတယျလို့ သိခဲ့တယျလို့ မကျဒီဆငျက ပွောကွားခဲ့။
-ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ အင်္ဂါနေ့ညက လက်စတာစီတီးအသင်းကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ရလဒ်ဆိုးတွေ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် နည်းပြလမ်းပတ်ရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နည်းပြကို ရှာဖွေနေပြီလို့ The Athletic က ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခုအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားရမယ့် လူတန်တောင်းနဲ့ အက်ဖ်အေဖလားပွဲစဉ်မှာ နောက်တဆင့် တက်ရောက်နိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့သာ ကျန်တော့တယ်လို့ သိရ။
-ချဲလ်ဆီးအသင်းနည်းပြ ဖရန့်လမ်းပတ်ဟာ လက်စတာစီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဟာ ရှုံးပွဲတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပင်နေတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပြီး အဲဒါကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့အတွက် အသင်းရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ပြသဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
-ဂျေမီ ရက်က်နက်ဟာ လက်စတာစီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတွက် ချဲလ်ဆီးအသင်းကစားသမားတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပြီး ဟတ်ဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းဟာ အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာ များများစားစား ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့သလို ကွင်းလယ်မှာလည်း ဟန်ချက်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းပြလမ်းပတ်ကို ပြစ်တင်ခဲ့။
LEICESTER, ENGLAND – JANUARY 19:
-ချဲလ်ဆီးအသင်းနည်းပြ လမ်းပတ်က လက်စတာစီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် ၎င်းရဲ့အသင်းဟာ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း ၅ ပွဲမှာ ၄ ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နည်းပြရာထူးအတွက် ဖိအားတွေတိုးလာခဲ့တဲ့ လမ်းပတ်က ၎င်းဟာ ဖိအားတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ တော်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
-ချဲလ်ဆီးနောက်ခံကစားသမား ရီးစ် ဂျိမ်းစ်ဟာ အင်္ဂါနေ့ညမှာ လက်စတာစီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်က ဒုတိယဂိုးကိုး ဆိုးရွားစွာ ခံစစ်ချဉ်းကပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂျေမီ ရက်က်နက်ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက် အခြေခံလေ့လာသင်ယူမှုက အရေးကြီးတယ်လို့ ရက်က်နက်က ပြောကြားခဲ့။
-လက်စတာစီးတီးအသင်းနည်းပြ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာက ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးနေရာကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ယခုရာသီ လက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ ဆုဖလားစိန်ခေါ်နိုင်ခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ငြင်းဆိုသွားခဲ့ပြီး မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးက ချန်ပီယံတွေဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
Leicester City’s English midfielder James Maddison (L) scores his team’s second goal during the English Premier League football match between Leicester City and Chelsea at the King Power Stadium in Leicester, central England on January 19, 2021. (Photo by Tim Keeton / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by TIM KEETON/POOL/AFP via Getty Images)
-လက်စတာစီးတီးကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ဂျိမ်းစ် မက်ဒီဆင်က ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ယူပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁ နေရာကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ချဲလ်ဆီးရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ ပြန်တည်ဘောတွေကနေ ထိုးဖောက်နိုင်မယ်လို့ လက်စတာစီးတီးက ယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ ပြန်တည်ဘောတွေမှာ တခါတရံ သိပ်အာရုံမစိုက်ထားတာကို တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီကနေ အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လို့ သိခဲ့တယ်လို့ မက်ဒီဆင်က ပြောကြားခဲ့။
အိုးထရကျဖို့ဒျကို ပွနျလာမယျ့ သဲလှနျစကို ပေးခဲ့တဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျဒို
20 Jan နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ အာဆငျနယျသတငျးမြား စုစညျးမှု